Miaraka amin'ny fstab: Ahoana ny fomba hametahana partition NTFS | Avy amin'ny Linux
Ny iray amin'ireo zavatra tadiavin'ny mpampiasa maro dia ny mametraka fizarazarana ho azy. Raha atao teny hafa, dia eritrereto hoe manana ampahany amin'ny kapila mangarahara (100GB ohatra) isika amin'ny fizarazarana hafa, fizarazaran-tserasera ampiasainay hitahirizana ny entantsika, na hilalaovana lalao amin'ny Windows.
Ahoana no fomba hanaovantsika azy io amin'ny Linux?
Misy fomba maromaro, fa amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny tena mahazatra, amin'ny fampiasana / Etc / fstab
Ny rakitra / sns / fstab dia ilaina amin'ny zavatra maro, fa ... ndao hifantoka amin'izay atrehantsika izao 😉
Aoka hatao hoe manana fizara antsoina hoe "Windows" isika (tsy misy ny teny nalaina), ary irinay fa isaky ny manomboka ny solosaina isika dia azo idirana io fizarazarana io, izany hoe tafapetraka. Ho an'ity…
1. Tsy maintsy mamorona fampirimana aloha isika / tapany /, ohatra: / haino aman-jery / varavarankely Mba hanaovana izany dia sokafy terminal ary apetraho ao ity manaraka ity:
2. Vonona, izao dia tsy maintsy fantarintsika tsara ny fizarazaran-tany tiana hapetraka, izany hoe, ny toerana misy azy. Mba hanaovana izany ao amin'ny terminal dia soraty izao:
Raha sendra fisarahana NTFS ianao, raha te-hametraka iray izay FAT32 dia tsotra, ovao ny toerana nilazany hoe NTFS ho an'ny FAT32
3. Tokony hiseho zavatra toy izao izy:
Ambarako amin'ny antsipiriany izay ilaintsika avy amin'io tsipika io, izay zavatra voalohany eo amin'ilay tsipika, ohatra: / dev / sda1
Raha ny marina ... ity ny andalana izay hanoro anao izany:
Eny ... ny tiana horesahina dia ny hoe tadidintsika tsara izay ilaintsika avy amin'io tsipika io.
4. Hatramin'izao dia tsy mila te-hametraka (manaraka ity ohatra ity isika) ny fizarazaran'i / dev / sda1 ao anaty fampirimana izay noforoninay tany am-piandohana, / media / windows / ... ho an'ity ao anaty terminal dia apetraho:
Ny zavatra hataony dia soraty ny torolàlana ao amin'ny / etc / fstab ka rehefa manomboka ny rafitra dia hametaka azy ho azy ilay fizarazarana.
Zava-dehibe!: Raha te hiasa ity dia ilaina ny mametraka ny fonosana ntfs-3g, satria tsy misy an'ity fonosana ity dia tsy azo apetraka ny fisarahana
Atsaharo ny solosaina ary tokony apetaho ny fizarazaran'izay tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Miaraka amin'ny fstab: Ahoana ny fomba hametahana partition NTFS ho azy
lahatsoratra tena tsara, sahirana fotsiny aho tamin'ity.
Talohan'ny namakiako ity lahatsoratra ity dia nanana olana tamin'ny fanitsiana ny angon-drakitra nananako tao amin'ny fizarana ntfs aho, azoko an-tsaina fa voavaha amin'ny "rw" izany ary ny iray hafa izay tsy mamela ahy hamafa ireo angona izay efa nananako tamin'ny fizara-n'ny nfts hatrizay milaza amiko izy fa tsy afaka mifandray amin'ny fako.
Azonao atao ve ny manazava ny dikan'ireo baiko ampiasainao:… "mpampiasa, umask = 000 0 0 ″ >> / etc / fstab"?
Aorian'ny fanovana ny fisie / etc / fstab dia azonao atao ny manoratra ao amin'ny terminal:
Avy eo i linux dia mametaka ireo fizarazarana voalaza ao amin'ny fisie fstab, tsy mila mamerina ny rafitra intsony.
David Becerra Montellano dia hoy izy:
Tsara, misaotra betsaka noho ny baiko:
Tonga lafatra izy io, toy ny fanaovana loharano aorian'ny fametrahana solon'anarana na fanambaràna miovaova,
ohatra: $ JAVA_HOME
Valiny tamin'i David Becerra Montellano
@platonov Andao handeha amin'ny ampahany
Ny safidy "mpampiasa" dia ahafahan'ny mpampiasa an'ny vondrona "mpampiasa" hametraka ny fizarazarana (ny safidy "mpampiasa" safidy mitovy amin'izany dia ahafahan'ny mpampiasa rehetra tsy an-kanavaka)
Ny safidy "umask = 000" dia saron-tava ahazoana alalana, amin'ity tranga ity, ny fisie an'ny fizarazarana nitaingina dia handray fahazoan-dàlana 777, izany hoe rwx rwx rwx, no avela indrindra. Raha tianao ny handefa alalana 755 ny umask dia ho 022, mila esorinao fotsiny ilay sarontava amin'ny 777, takatra ve izany? 🙂
ireo zeroa roa mandroaka dia mifanitsy amin'ny tsanganana "dump" sy "pass". Ny voalohany dia ho an'ny backup partition, amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 0. Ny faharoa dia ny filaharana fsck priorité, raha amin'ny 1 (mazàna ny partition root) no voalohany voamarina, raha amin'ny 2 izy dia ilay manaraka ary raha amin'ny 0 dia tsy voamarina.
Heveriko fa izany no izy, amin'ny fotoana sasany dia manana fisalasalana aho, koa avelao aho handeha raha diso aho 🙂
Fanazavana tena tsara.
Fanontaniana iray: fantatrao ve raha ampiasain'ny programa maoderina sasany ny tsanganana fanariam-pako sa efa lany andro? Diso angamba aho fa raha ny fahalalako azy dia ny fanariam-pako ihany no baiko ampiasana azy ... efa liana fotsiny io. 🙂
Misaotra tamin'ny fampahalalana, mandeha tsara ho ahy izy izao ary nianatra zavatra bebe kokoa aho.
Ny iray amin'ireo zavatra tiako ho an'ny Linux dia ny fanampiana omenao ny mpampiasa!
Momba ny fanariana, tsy misy hevitra, tsy nanao izany karazana backup izany mihitsy aho. Eto izahay hianatra 🙂
Tafurer dia hoy izy:
Rehefa mihazakazaka aho:
sudo echo "/ dev / sda1 / media / windows ntfs-3g auto, rw, mpampiasa, umask = 000 0 0" >> / etc / fstab
Mamaly ahy izy:
bash: / etc / fstab: Nolavina ny fahazoan-dàlana
Misaotra mialoha amin'ny valinteninao.
Valiny tamin'i Tafurer
raha te hanova izay rakitra ao amin'ny lahatahiry / sns (toy ny fstab) dia mila faka ianao na hampiasa ny programa sudo (izay mahatonga anao hongotana ao amin'io baiko manokana io).
Isaky ny miseho ny "Fandavana ny fahazoan-dàlana" dia izay no olana. Mety ho toa manelingelina ny hoe mila miorim-paka, saingy fepetra lehibe amin'ny rafitra io mba hialana amin'ny fanovana tsy ilaina.
Eny eny, io no nolazainao.
Very hevitra aho satria nino fa miaraka amin'ny sudo voalohany dia efa root aho.
Misaotra betsaka anao noho ny olana tamin'ny famaliana ahy ary toy izany koa noho ny lahatsoratra navoakako ho an'ny fotoana manaraka.
Raha ny marina amin'ny sudo dia mandefa ilay baiko ho faka. Ny zava-mitranga dia ny fanodinana >> dia nataon'i bash alohan'ny hamonoana an'i sudo, noho izany dia manandrana manoratra ny rakitra raha tsy mahazo alalana faka.
@ KZKG ^ Gaara: Safidy iray mety ny mametraka ny baiko toy izao:
sudo sh -c 'echo «/ dev / sda1 / media / windows ntfs-3g auto, rw, mpampiasa, umask = 000 0 0» >> / etc / fstab'
Tsy dia mazava loatra, fa tsy manome olana alalana. 🙂
Misaotra Gaara, namaha ny fanontaniana ny fahalalana ny fisarahana izay liana amin'ny gparted, variant tadiaviko, ny zavatra hafa rehetra OK
isanter dia hoy izy:
Raha fisarahana ao amin'ny FAT32 ny baiko toa izany
sudo echo "/ dev / sda1 / media / windows FAT32-3g auto, rw, mpampiasa, umask = 000 0 0" >> / etc / fstab
Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, misaotra
Mamaly an'i isanter
sudo echo "/ dev / sda1 / media / windows vfat auto, rw, mpampiasa, umask = 000 0 0" >> / etc / fstab
vfat dia Fat32 😉
Lahatsoratra tsara 😀
tena tsara ho an'ny mpampiasa Fedora, izay manana installer izay tsy mamela ny fametrahana mandritra ny fametrahana azy
Lahatsoratra mahafinaritra fotsiny.
Voahangy no tonga tamiko.
Ity tutorial ity dia mety ho tsara tamiko andro vitsivitsy lasa izay, saingy nanapa-kevitra ny hanao fametrahana madio ny malalako Mageia 3 amin'ny kapila mafy aho ary amin'ny kapila iray hafa fametrahana madio sy fototra an'ny W7 hamela azy ho "Console", lol. Na izany aza dia hampiasaiko kely izy io satria efa mizaha lalao tsara mandeha amin'ny Linux aho ...
Tsy tara loatra izany, misaotra betsaka tamin'ny fanazavana.
Tsy vitako mihitsy io kaody io, tsy nisy na inona na inona nitranga tamin'ny fisie fstab, nivoaka izy io:
fitsapana miaraka amin'ny:
sudo echo "/ dev / sda1 / media / windows ntfs-3g auto, rw, mpampiasa, umask = 000 0 0" >> sudo / etc / fstab
sudo echo "/ dev / sda1 / media / windows ntfs-3g auto, rw, mpampiasa, umask = 000 0 0" >> su / etc / fstab
ary tsy nisy na inona na inona, tsy maintsy nampidiriko tamin'ny tanana, efa mandeha izy io, ny zavatra mahatsikaiky dia nisy fisie roa noforonina tao an-trano, ny iray antsoina hoe su, ary ny iray sudo sy ao anatiny dia ireo andrana rehetra natao handika ilay andalana voalaza ireo, saingy tsy nisy teny nalaina ,
Toy izao no fiasan'ny "akony", anaovany izany, miditra ho faka, fa izay no izy:
[kaody] sudo su [/ kaody]
Hanontany anao ny tenimiafiko sudo aho dia hahita zavatra toy izao ianao:
[kaody] [root @ Jarvis x11tete11x] # [/ code]
Eto ianao dia hanana alalana faka ary afaka manatanteraka an'io baiko mangina io ianao
Izy io dia niasa lavorary tamiko tao Mageia 4 alpha 3 satria na dia nanamarina aza aho tamin'ny "System Prefers" mba hametahana azy ireo ny fizarazarana rehetra ary hanisy marika azy rehetra dia tsy.
Linuxer dia hoy izy:
Amin'ny ubuntu sy derivatives izay manana udisk dia mora kokoa ny mampiasa azy:
mpampiasa @ masinina: # udisk –mount / dev / sdaX
sdaX = fizarana ntfs
Azonao atao ny manampy azy mora foana amin'ny /etc/rc.local sy voila = D
Mamaly an'i Linuxer
Salama, manana olana aho, ny zava-mitranga dia ny tsy ahafahako mametraka ny fizarazaran'i Windows ary manandrana mampiasa Ubuntu 14.04 aho raha tsy apetraka ao, ahoana no fomba anaovako izany? Mila esoriko amin'ny fampirimana manokana ny zavatra ataoko: / Ary rehefa te-hametraka an'ity aho dia te-hanala tanteraka an'i Windows: /
johnjoneshq dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao tamin'ny fandraisana anjara fa tsy afaka mametraka ilay fizarazarana aho, milaza amiko fa nolavina izany, tokony holazaiko ihany koa fa talohan'ny nametrahana Windows 8 fa nesoriko tanteraka izy io, tsy hitako izay hatao, antenaiko fa afaka manampy ahy ianao, misaotra mialoha 😀
Mamaly an'i johnjoneshq
moonwatcher dia hoy izy:
miasa tonga lafatra, misaotra.
@johnjoneshq ataovy amin'ny faka (ny + tenimiafinao +) fa tsy amin'ny sudo.
izany no fiasa amiko 😉
Mamaly an'i moonwatcher
Nerol dia hoy izy:
Tsy ilaina ny mamerina indray raha toa ka manatanteraka ilay baiko isika:
Angamba ny bilaogy linux tsara indrindra amin'ny Espaniôla. Miarahaba ny mpiara-monina iray manontolo
Valiny tamin'i Nerol
qinxiu dia hoy izy:
Ahoana ny famoahana ny torolàlana farany napetrakao?
satria rehefa miditra ny kaody farany im-betsaka aho dia mahazo ireto manaraka ireto amin'ny fidiran'ny rafitra:
Ny fiara NTfs-3g dia tsy vonona na eo.
Miandrasa hatrany, na tsindrio ny S fa tsy misy mount na M hahasitrana amin'ny tanana
Mamaly an'i qinxiu
Nathan dia hoy izy:
Tiako !!! Misaotra betsaka!!
Valiny tamin'i Nathan
El_trabuco dia hoy izy:
Mijery eto https://wiki.archlinux.org/index.php/Fstab_(Espa%C3%B1ol) Nahita an'ity fomba ity aho mba hampifandraisana ny fisarahana FAT32 amin'ny "fstab".
/ dev / sda5 / media / Mpampiasa vfat Volume13GB, rw, umask = 111, dmask = 000 0 0
Tsy misy olana amin'ny Linux Mint-ko
Mamaly an'i El_trabuco
Connectbot: Midira amin'ny PC amin'ny alalàn'ny SSH amin'ny Android